ဗီလာရီးရဲနဲ့ပွဲမှာ တာဝန်မကျေသေးတဲ့ မာရှယ်ကို ထုတ်သုံးမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ဆိုလ်းရှား – FBV SPORT NEWS
ဗီလာရီးရဲနဲ့ပွဲမှာ တာဝန်မကျေသေးတဲ့ မာရှယ်ကို ထုတ်သုံးမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ဆိုလ်းရှား
May 10, 2021 By admin Sports News
ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဗီလာရီးရဲအသင်းတို့ ကန်မယ့်ပွဲစဉ်မှာပရိတ်သတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ကစားသမား ကို ပြန်ထုတ်သုံးသွားဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုလ်းရှားက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ညနေခင်းသတင်းကတစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကစားသမားကတော့ အခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဒဏ်ရာကြောင့်ကာလရှည်ကြာအနားယူနေခဲ့ရသော ဆရာရှားလ်အချစ်တော်တိုက်စစ်မှုး Anthony Martial ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မာရှယ်ဟာ ယခုအခါ လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီးလုံလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းရရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။
” ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှာ ကျွန်တော့်ကစားသမားတွေ မိနစ် ၉၀လုံးလုံးကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ရက်ဖို့စ် မာရှယ် မက်ဂွိုင်းယား တို့ဟာ ဒဏ်ရာရရှိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမယ့် ဗီလာရီးရဲနဲ့ပွဲမှာတော့ မာရှယ်လည်း ပြန်ကစားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်. အခုဆိုရင် ဂရင်းဝုဒ်က ရှေ့တန်းမှာ အသင်းအတွက်အများကြီးလုပ်ပြပြီးပြီး။ ကာဗာနီလည်းအများကြီးလုပ်ပြပြီးပြီ။ မာရှယ်ပဲကျန်တော့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ သူပါဝင်နိုင်ပြီး သူ့အရည်အချင်းတွေကို ပြန်ထုတ်ပြမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်”လို့ ဆိုလ်းရှားကဆိုပါတယ်.
ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီနှစ်နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ အထောင်တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တစ်ယောက် အမှန်တစ်ကယ်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီး ကာဗာနီဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် အဖြေမဟုတ်ပဲ ဆေးမြီးတိုပဲဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်၊။ ဆိုလ်းရှားအချစ်တော်မာရှယ်ကတော့ အသင်းကနေရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေတော့ထွက်နေတာရှိပါတယ်။
ဆိုလ်းရှားနဲ့ ကွင်းလယ်က သရဲနီတပ်သားတွေကို အံဩချီးကျူးလိုက်တဲ့ ကလော့ပ်
Fernandes wants United to sign two new players before he commits.